I-Adobe Spark sisizukulwana esitsha se-Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Izixhobo zoYilo, Photoshop
Njengabanye abantu abaninzi, siyayazi i isixhobo sokuhlela umfanekiso kunye noyilo lwegraphic Photoshop, oluveliswa yiAdobe Systems Incorporate. Esi sicelo sisetyenziselwe ikakhulu i- hlela okanye uphinde uphinde ufake iifoto okanye imifanekiso eyona nto siyithanda kakhulu, ethi ngegama layo ngeSpanish inentsingiselo "yefoto yocweyo".
Ikwangulowo unesikhundla inani lokuqala kwimarike Esinye sezixhobo ezisetyenziselwa ukuhlela umfanekiso kwaye silawula le ndawo, yiyo loo nto igama laso lisetyenziswe njengegama elifanayo xa kufikwa ekwenzeni lo msebenzi.
1 Sikuxelela kancinci malunga nokuqala kweAdobe Spark
2 Yintoni iAdobe Spark?
Sikuxelela kancinci malunga nokuqala kweAdobe Spark
Singatsho ukuba yaqala ngo-1987, xa uThomas Knoll njengomfundi kwiDyunivesithi yaseMichigan, wayenethuba lokubhala inkqubo kwiMacintosh Plus, ukubonisa imifanekiso engwevu kunye nokuziswa kwiscreen se-monochrome.
Le nkqubo, ibizwa ngokuba yiDisplay, ibingumthombo wokuqwalaselwa ngumntakwabo uJohn Knoll, owayesebenza kwinkampani ye-Industrial Light & Magic, owacebisa ukuba uThomas ajike inkqubo yakhe ibe yeyokusebenza ngokupheleleyo ekuhleleni imifanekiso. Kakade ke, kwaye sele ngo-1988, wabhala kwakhona Ikhowudi yokubonisaUkuze isebenze kwizikrini zemibala kunye nokusebenza kunye, abazalwana bakwazi ukwandisa amandla enkqubo. Ngokukwanjalo, uThomas uphucule amandla esixhobo ukuze akwazi ukufunda nokubhala kwiifomathi ezahlukeneyo, ngelixa uJohn esenza ukusetyenziswa kwe Ukucwangciswa komfanekiso ethi kamva ifumane igama lokucoca ulwelo.
Kwiinguqulelo zokuqala ze Adobe Photoshop, le nkqubo isebenze kwisithuba esiqulathe umaleko omnye, apho kunokusetyenziswa iintlobo ngeentlobo zeziphumo, iifonti yokubhaliweyo, amanqaku kunye nonyango olwahlukeneyo. Namhlanje izalisekisa imisebenzi efanayo kodwa isebenzisa iindlela ezininzi.
Isicelo ngandlel 'ithile sinokuthi ukusukela oko yaqalwa, kwifayile ye- isixhobo esisezantsi sokuhlela ifoto, kodwa ayisiyiyo le kuphela, ikwasetyenziselwa uqeqesho oluninzi kuyilo kunye nendawo yokufota ngolu hlobo, enje ngefotocomposition, uyilo lwephepha lewebhu okanye nawuphi na omnye umsebenzi ofuna unyango lwemifanekiso yedijithali.
Kuba iAdobe Photoshop sisixhobo esibalulekileyo kule ndawo, kukwakho nenye enokuthi ithathe indawo yale nkqubo, ke kweli nqaku sikulethela ulwazi malunga nenkqubo Adobe Spark, Isizukulwana esitsha seFotohop.
Yintoni iAdobe Spark?
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, inkampani yeAdobe yaqala ukusungula usetyenziso lwe-iOS, ebenakho ukuvumela abantu ukuba bazenzele umxholo wendalo obonakalayo kunye nenkqubo elula. Izixhobo ezinje ngeAdobe Post, iAdobe Slate kunye neAdobe Voice, ethi namhlanje inkampani ithathe isigqibo sokubandakanya indlela enye nohlobo lweWebhu oluhambelana nayo olubizwa ngokuba yiAdobe Spark.
Ukwazi oku, inkqubo yeAdobe Spark ibandakanya izixhobo Spark ividiyo, Spark, iphepha kunye neSpark post, Ezizixhobo esinokuzivavanya kwiwebhusayithi spark.adobe.com simahla. Ewe sidinga iakhawunti yomsebenzisi weAdobe okanye ngumahluko wayo sinokungena ngeakhawunti yethu kaGoogle okanye kaFacebook.
Kuba siyenzile le nto, siya kuba ujongano phambi kwethu ukuze ilula kwaye inomdla, osibuza umbuzo ophezulu malunga nento esifuna ukuyenza. Izinketho ezibonisiweyo zibonisiwe ngamaqhosha amathathu aluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza kunye nobomvu, ahambelana nezixhobo ze Iposi, iphepha kunye nevidiyo, nganye nganye inenkcazo emfutshane malunga nemisebenzi yayo.
Kwelinye icala, singakhankanya ukuba kungenzeka ukuba le nkqubo isinikeze ukwenza iprojekthi kwifowuni yethu kwaye sikwazi ukuyigqiba kwinkxaso yewebhu okanye inokuba yenye indlela ejikeleze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » I-Adobe Spark sisizukulwana esitsha se-Photoshop
UMarcel Patrick Craig Fields sitsho
I-Noo adobe spark iyimfihlo.
Phendula kuMarcel Patrick Craig Fields
UMauro Sanchez sitsho
Andikayiqondi into eyenzelwe yona
Phendula uMauro Sánchez
UCarlos Pachas sitsho
Esinjani isihloko sobudenge iAdobe Spark yokwenza iiposta kunye neposi yenethiwekhi yoluntu, iPhotohop yeyokuhlela ifoto -_-
Phendula uCarlos Pachas
UEduardo Jorquera sitsho
Yila ndoda yaseLightroom, ifotoshop ingaphezulu kokufota.
Phendula uEduardo Jorquera